Ulf Kristersson (M) oo magacaabey hogaanka sare ee xisbigiisa - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ulf Kristersson (M) oo magacaabey hogaanka sare ee xisbigiisa
La daabacay tisdag 3 oktober 2017 kl 14.30
Hogaamiyaha xisbiga M ee Ulf Kristersson. sawir: Stina Stjernkvist/TT
Hogaamiyaha xisbiga Modaraad-ka Ulf Kristersson ayaa maanta soo bandhigey madaxda sare ee xisbigaas ee xarunta dhexee xisbiga iyo baarlamaanka intaba.
1- Elisabeth Svantesson ayaa noqotey afhayeenka xisbiga Modaraad-ka u qaabilsan arrimaha dhaqalaha, jagadaanina waa tii horey uu u heyn jirey Ulf Kristersson ka hor intaan loo dooran hogaamiyaha xisbiga.
2- Jessica Polfjärd ayaa noqotey madaxa cusub ee gola hoosaadka dhanka suuqa shaqada u qaabilsan baarlamaanka Sweden , isla markaana ah afhayeenka xisbiga Modaraad-ka u qaabilsan arrimaha suuqa shaqada.
3- Tobias Billström ayaa noqdey hogaamiyaha cusub ee xildhibaanada xisbiga Modaraad-ka ugu jira baarlamaanka dalkaan Sweden.
4- Anders Edholm ayaa isna dib wuxuu ugu soo noqdey jagadiisii hore oo aheyd kaaliyaha xogheynta xisbiga.
5- Gunnar Strömmer oo noqdey madaxa ururka dhallinyarada xisbiga Modaraad-ka ee Muf, isla markaana noqdey xoghayaha xisbiga Modaraad-ka.
Gunnar Strömmer ayaa ah qareen,xubin ka ah golaha sare ee maamulka xisbiga Modaraad-ka.
Hogaamiyaha cusub ee loo magacaabey madaxa xildhibaanada xisbiga Modaraad-ka ugu jira baarlamaanka Sweden ayaa wuxuu ilaa hadda ahaa ku xigeenka koowaad ee afhayeenka baarlamaanka Sweden , wuxuuna xilli hore wasiirka socdaalka ka soo noqdey dawladdii hore ee ay wadaaga ku ahaayeen xisbiyada Alliansen.